काठमाडौंमा शुरु भयो स्मार्ट पार्किङ, के हो 'स्मार्ट पार्किङ' ? - Sidha News
काठमाडौंमा शुरु भयो स्मार्ट पार्किङ, के हो ‘स्मार्ट पार्किङ’ ?
काठमाडौं–सवारी साधन पार्किङलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले आज (बिहीवार) बाट स्मार्ट पार्किङ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
स्मार्ट पार्किङ वैशाखको सुरुवातसँगै सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको थियो यद्यपी विभिन्न प्राविधिक कारणले समयमै सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।
सवारी साधनको अत्याधिक चापका कारण ट्राफिक जाम हुनुका साथै शहर अस्तव्यस्त भएपछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न महानगरले स्मार्ट पार्किङ योजना अघि सारेको थियो ।
सो योजना आजबाट कार्यन्वयनतिर लागेको छ । काठमाडौंको नयाँ रोड आसपासका ५ स्थानमा स्मार्ट पार्किङ शुरु भएको छ । महानगरपालिले ‘ब्हिल्स ट्रली योर्स प्रा.ली’ र ‘एड गुरु’ सँगको सहकार्यमा यो सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
५ स्थानमा स्मार्ट पार्किङ सञ्चालनमा ल्याउनका लागि १ करोड लागत लागेको प्रालीका सूचनाअधिकारी प्रविधि इन्जिनियर हरिश अग्रवालले जानकारी दिए ।
‘स्मार्ट पार्किङ भनेको अटोमेटिक पार्किङ हो’ उनले भने । त्यस्तो पार्किङ हालसम्म कुनै पनि स्थानमा नभएकाले पनि सवारी प्रयोगकर्ताका लागि व्यवस्थित हुने कुरामा अग्रवाल विश्वस्त छन् ।
कुन—कुन स्थानमा स्मार्ट पार्किङ ?
तत्कालका लागि ५ स्थानमा स्मार्ट पार्किङ राखिने अग्रवालले बताए । ‘विशालबजार, इन्द्रचोक, पाको, प्युखा र खिचापोखरीमा स्मार्ट पार्किङ राखिनेछ, ‘दरवारमार्गमा भने एक हप्ता लाग्नेछ’ उनले भने ।
स्मार्ट पार्किङमा दुइ पांग्रे तथा चार पांग्रे सवारी साधनले पार्किङ गर्न पाउने छन् । कम्पनीले एप्स्मार्फत स्मार्ट पार्किङ गर्ने सुविधा समेत ल्याएको छ ।
‘प्रयोगकर्ताले मोवाइलमार्फत ‘Ktm park’ एप्लिकेशन डाउनलोड गरी घरमै बसेर पार्किङ बुकिङ गर्न सक्नेछन्’ अग्रवालले भने ।
उनका अनुसार पार्किङ गर्न चाहने व्यक्तिले एप्लिकेशन मार्फत घरमै बसेर पार्किङका बारेमा सुचना लिन सक्नेछ भने १५ मिनेट अगाडी नै पार्किङ बुकिङ गर्न पाउनेछ ।
तत्कालका लागि एउटा मात्र एप्लिकेशनको सुविधा भएको बताउँदै अग्रवाल भन्छन्,‘केही समयपश्चात ई—सेवा, भिसा कार्ड लगायत सिस्टमबाट पनि पार्किङको रकम तिर्न र बुकिङ गर्न सकिने छ’ । अहिले पेमेन्टका लागि ‘पोस’ नामक मेसिन राखिएको छ ।
शुरुवातमा यी स्थानमा पार्किङ राखिएपनि विस्तारै अन्य स्थानमा पनि सञ्चालनमा ल्याउने अग्रवालको भनाइ छ । यी स्मार्ट पार्किङ राखिने स्थानहरुमा एक पटकमा ८ सय वटा मोटरसाइल/स्कुटर र ४० वटा सवारी साधन पार्किङ गर्न सकिनेछ ।
नेपालमा पहिलो पटक सञ्चालनमा आएको स्मार्ट पार्किङ अन्य पार्किङ तुलनामा फरक छ । सेन्सरमा आधारित स्मार्ट पार्किङ सञ्चालन गरिने भनिएपनि विभिन्न कारण छोटो समयमा कम्पनीले सो पार्किङ गर्न नसकेको अग्रवालले बताए । ‘तत्कालका लागि पुरानै पार्किङ क्षेत्रमा नयाँ ढंगले अगाडी बढ्का हौँ, केही महिनामापछि सेन्सरमा आधारित पार्किङ सुविधा ल्याउने छौँ’ उनले भने ।
‘सेन्सरमा आधारित पार्किङका लागि महानगरसँग सहकार्य भएको र जग्गाको व्यवस्था भइसकेको छ’ उनले भने ।
रिजर्भ गरेको समय, पार्किङ गरिएको स्थान र समय, पार्किङ शुल्कजस्ता विवरण क्युआर कोर्डबाट पनि हेर्न सकिन्छ । त्यस ठाउँको व्यवस्थापनका लागि गोप्रो क्यामरा सहित ६० जना पार्किङ सहयोगी खटिएका छन् । यस प्रणालीमा सवारी प्रवेश गरेको र निस्किएको रेकर्ड हुन्छ ।
यी क्षेत्रमा पार्किङ गर्दा दुइ पाङग्रे सवारीका लागि प्रति घण्टा करबाहेक २० रुपैयाँ लाग्नेछ । त्यस्तै चार पाङग्रे सवारीका लागि प्रति घण्टा ६० रुपैयाँ लाग्नेछ ।